प्रभासको नयाँ चलचित्र 'साहो' प्रदर्शनका लागि तयार, कस्तो छ दमखम? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रभासको नयाँ चलचित्र ‘साहो’ प्रदर्शनका लागि तयार, कस्तो छ दमखम?
बाहुबली फेम प्रभासले आफ्नो १७ वर्षको फिल्मी करिअरमा १८ वटा फिल्म्मामात्र काम गरेका छन्। दक्षिण भारतको तेलगु सिनेमाका यी सुपरस्टारलाई एसएस राजामौलीको बाहुबली सिरिजले भारतभरि पहिचान दिलायो।
सन् २०१७मा रिलिज भएको बाहुबली-२ पछि प्रभासको कुनै पनि फिल्म रिलिज भएको छैन र यस पटक उनका प्रशंशकहरू उनको आगामी चलचित्र ‘साहो’को व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिराखेका छन्।
‘साहो’ अगस्ट ३० मा विश्वभरि रिलिज हुँदैछ र यसको निर्माण पक्ष र प्रभास्का प्रशंशकहरूको चासो यसले बाहुबली-२ को रेकर्ड तोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने रहेको छ।
बाहुबली-२ ले रिलिज भएको दिन नै भारतभरि बाट १२१ करोड भारुको कमाइ गरेको थियो। त्यसपछि कुनै पनि फिल्म कमाइको मामिलामा यसको छेउछाउ पनि पुग्न सकेका छैनन्। बाहुबली-२ को हिन्दी संसकरणले मात्रै पहिलो दिन ४० करोड भारु कमाएको थियो।
तर फिल्म साहोले बाहुबली-२ को एउटा रेकर्ड भने तोड्ने निश्चित प्रायः भएको छ। यसको निर्माण पक्षले फिल्मलाई भारतभरि आजसम्मकै सबै भन्दा बढी सिनेमाका पर्दाहरूमा रिलिज गर्ने योजना बनाएको छ।
बाहुबली-२ लाई भारतभर छ हजार पाँच सय पर्दाहरूमा रिलिज गरिएको थियो। एउटा तथ्यांकअनुसार भारतमा हाल नौ हजार ३क सय जति सिनेमाका पर्दाहरू उपलब्ध रहेका छन्। बाहुबली-२ को रेकर्ड तोड्न यसको निर्माण पक्षले यसलाई देशका दुई तिहाइभन्दा बढी पार्दाहरूमा रिलिज गर्नुपर्ने देखिन्छ।
साहोका निर्माता र वितरकहरूले यस फिल्मले दक्षिण भारतीय भाषाका संस्करणहरूमा बाहुबली-२ को रेकर्ड तोड्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। तर हिन्दी भाषी क्षेत्रमा भने यसलाई चुनौती आउन सक्छन्। सन् २०१९ का आठ महिनामा हिन्दी भाषामा रिलिज भएका बलिउडका थुप्रै ठुला सिनेमा धरशायी भएका छन्।
यस वर्ष बलिउडमा रिलिज भएका ठग्स अफ हिन्दोस्तान जस्ता ठुला बजेटका सिनेमा बक्स अफिसमा धराशायी भए
साहोको ट्रेलरको लोकप्रियता हेर्ने हो भने यसले हिन्दी भाषी क्षेत्रमा पनि निकै राम्रो प्रदर्शन गर्ने देखिन्छ। तर पहिल्लो समय ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफ अभिनित यशराज फिल्म्सको सिनेमा ‘वार’को ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि मान्छेहरूको ध्यान साहोबाट केही हटेको बताइन्छ।
त्यस्तै उत्तर भारतका दिल्ली, उत्तर प्रदेश र पन्जाब जस्ता सघन हिन्दी भाषी क्षेत्रमा यस फिल्मको खासै प्रचार पनि गरिएको छैन। तर यसको वितरणमा संलग्न कम्पनी ए ए फिल्म्सले भने यसले पहिलो दिनमा हिन्दी संसकरणबाट मात्रै ५० करोड भारुभन्दा माथिको कमाइ गर्ने आशा लिएको बताएको छ। तर फिल्मको एडभान्स बुकिङको अवस्था हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिन्न।
साहोमा प्रभाससँग श्रद्धा कपूरलाई देख्न सकिने छ। यस फिल्मको कुल बजेट तीन सय करोड भारु नाघिसकेकाले फिल्मले आफ्नो लागत उठाउन समेत धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएको छ।
ट्याग्स: baahubali-2, Saaho